पार्टीभित्र सरकारको समिक्षा भइरहेको छ – Janaubhar
पार्टीभित्र सरकारको समिक्षा भइरहेको छ
प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन १४, २०७५ | 242 Views ||
रेखा शर्मा,केन्द्रीय सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
केन्द्रमा पार्टी एकता भइसकेपछि प्रदेश र जिल्लामा एकता प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन । किन यसरी ढिला भएको हो ?
सरकार, संसद्का कामहरु भए । एकपटक कार्यदल बनाएर प्रदेशसम्म छलफल पनि भयो । कार्यदलले पहिले हामीले जे मापदण्ड कार्यविधि बनाएका थियौं त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आयो । अहिले कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधि पास भइसकेको छ । असोजभित्र तलैसम्म पार्टी एकता प्रकृया टुंगोमा पुग्ने छ ।
केन्द्रमा सांगठनिक रुपमा एकता भयो । भावनात्मक रुपमा पनि तपाई एक भइसक्नुभएको हो कि ? सांगठनिक रुपमा मात्रै केन्द्रमा एकता भएको हो ?
हामीले निर्वाचनकै बेलादेखि एकता प्रक्रियामा सामेल भयौं । एउटै घोषणा पत्र लिएर हामी चुनावमा गयौं । साझा उम्मेदवार बोकेर हामी जनताको बीचमा गयौं । लामो समयदेखि विभाजनको विरासत बोकेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एकता प्रकृयामा गयो । दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टी मात्र नभएर दुई वटा अलग,अलग धार बोकेका पार्टी बीचमा एकता भएर राष्टूलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने कुरामा हामी सबै उत्साहित छौं । माथी पनि उत्साह छ र तल जनता तथा कार्यकर्ता तहमा पनि उत्साह थपिएको छ । चुनावले हामी सबैमा अन्तरघुलनको स्थिति पैदा ग¥यो । अहिले भावनात्मक तिक्तताको स्थिति छैन । तर,पनि काम गर्दै जाँदा समय क्रममा केही समस्या हो । एउटै पार्टीभित्र त समस्या हुन्छ । दुई ठुला पार्टी मिल्ने क्रममा केही समस्या आउँला तर,हामी ती सबै समस्या सहजै रुपमा समाधान गर्न सक्छौं । हामीले सोचे भन्दा छिटो पार्टी कार्यकर्ता बीचमा अन्तरघुलनको स्थिति देखापरेको छ ।
निर्वाचनमा संयुक्त गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता प्रकृया शुरु हुँदा आम मान्छेमा निकै उत्साह देखिन्थ्यो, नयाँ सरकारबाट मान्छेले धेरै आशा पनि गरेका थिए । तर, यो सरकार त परम्परागत सरकार जस्तै देखियो नि हैन ?
हामी जसरी साझा घोषणा पत्र र साझा उम्मेदवार लिएर जनता कहाँ गयौं । जनताले हामीलाई दुई तिहाईको नजिक पु¥याए । केन्द्रमैं पार्टी एकता हुन धेरै समय लाग्यो । एउटै पार्टीभित्र त काम गर्न कति अप्ठेरो हुन्छ । यत्रो लामो समयसम्म अलग,अलग धार, प्रवृत्ति र विचार बोकेका पार्टीहरु एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने कुरा त्यति सहज थिएन । तर,अहिले केन्द्रमा पार्टी एकता भयो तलसम्म हुन बाँकी छ । सरकारको कामको समिक्षा जरुरी छ । अर्को कुरा यसमा प्रायोजित कुराहरु धेरै छन् । चार महिना भयो सरकार गठन भएको यतिबेलानै परिणाम देखिने बेला भएको छैन । लक्षणसम्म देखिने बेला हो, यो समय । अहिले जुन ढंगले देशलाई समृद्धिको दिशा तर्फ लैजाने सोचका साथ अघि बढेको छ, यो राम्रो हो । केही कुराहरु बाहिर उठाइएका छन् । केही कुरा सकारात्मक ढंगले उठाइएका छन, त्यो राम्रो हो । यसले हामीलाई काम गर्न थप हौंसला दिन्छ । यो परम्पराको सरकार होइन । यो सरकार हिजोको जस्तो ६÷८ महिनामा फेरिने खालको सरकार पनि होइन । यसले आशावादी बनाउनुपर्छ ।
अहिले अत्यन्त प्रायोजित ढंगले पनि प्रचार भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रतिकृयावादीहरुले कम्युनिष्टलाई हेप्दैआए । अहिले नेपालमा ठुलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । यसलाई जसरी भएपनि सिद्धाउनुपर्छ भनेर केही शक्ति केन्द्रहरु आरोप,प्रत्यारोप र प्रायोजित हल्लामा लागेकाछन् । सर्वसत्तावाद र लोकतन्त्रको हरण गर्न थाल्यो भनेर आरोप पनि लगाइरहेकाछन् । अहिले अत्तालिएको अवस्थामा केही शक्तिहरु सरकारको खोइरो खन्न लागेका छन् । आफ्नो वर्ग दृष्टिकोण अनुसार अत्तालिएर लगाउने आरोप र जनतालाई फाइदा होस भनेर दिने सुझाव बीच फरक हुन्छनै । सकरात्मक सुझावलाई पार्टी र सरकारले ग्रहण गर्नैपर्छ । अब सरकारका सबै मन्त्रीका कामको समिक्षा गर्नुपर्छ । केही सिमा समस्या देखिएका छन भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई, चार महिनाकै अवस्थामा हामीले सरकारले केही काम गर्न सकेन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने बेला अझै भएको छैन । सिमा कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने कुरा हुन्छ ।
वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल बाहेक अरु मन्त्रीहरुले कुनै देखिने गरि काम गरेका छैनन् । यो बीचमा नेकपाको बैठकमा कुरा उठ्दैन ?
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटि छ । त्यहाँ भित्र कुरा उठ्न सक्ने स्थिति छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक यसका लागि मात्र बस्ने स्थिति पनि छैन । स्थायी र हेडक्वाटरमा यो विषयमा कुरा उठिरहेको छ । अरु मन्त्रीहरुले पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ । राजनीति र अन्य क्षेत्रमा पनि परिणाम नआउँदासम्म काम देखिदैंन् । त्यसको तयारीका बारेमा कसैले ध्यान दिदैनन् । परिणाम आएपछि मात्र मेहनत देखिन्छ । अहिले आन्तरिक रुपमा सबैले मेहनत गरिरहनु भएको छ । केही सिमा,कमजोरीहरु पनि हुन सक्लान त्यसलाई समिक्षा गर्ने विषय हो । सरकारले पनि आफ्ना कामका बारेमा समिक्षा गरिरहेको छ । पार्टीभित्र पनि गम्भिरतापूर्वक कुरा उठेको छ । यसमा पार्टीका शीर्ष नेताहरु सहित हामी यसपटक राम्रो काम हुन सकेन भने हाम्रा कारणले हुन्छ भन्ने कुराको निचोडमा पुगिएको छ । हामी हाम्रै कारणले गर्न सक्दैनौं । स्थानीय देखि केन्द्रसम्म हाम्रो वहुमत छ । अब अरुलाई दोष दिने ठाउँनै छैन ।
डा.गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र देखिएको विकृति विरुद्ध सत्याग्रहमा छन । देश अहिले केसीमय जस्तो देखिन्छ । तपाईहरुको पार्टी नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा के सोचिरहेको छ ?
सरकारले आफ्नो सोच बाहिर आएको छ । अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश आएकोे थियो । त्यो अध्यादेशलाई विस्थापित गर्न विधेक ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो विधेक आयो । गोविन्द केसी जी अनशनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो विधेक संसद्मा प्रवेशनै गर्न नदिने भनेर प्रतिपक्ष आयो । गोविन्द केसीजी का जाहेज माग छन भने त्यसको समाधान पनि संसदबाटै खोजिनुपर्छ । विषयवस्तुलाई संसद्मा छलफल त गर्न पाउनु प¥यो नि । तर, उहाँले जे गर्नु भएको छ, त्यो गलत छ ।
सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । सरकारले गोविन्द केसीको तर्फबाट ध्यान पनि दिएको छ ।गोविन्द केसीका माग अरु कसैको राजनीति अभिष्ट पूरा गर्ने दिशाबाट आयो कि ? संसद्को सर्वोच्चतालाई नसैले पनि नकार्न हुँदैन् । विधेक बनाउने जनप्रतिनिधिको काम हो । त्यो विधेयक कस्तो बन्छ भन्ने कुरा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो . जनप्रतिनिधिले गलत कानुन बनाए भने त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने छन् । तर,एउटै व्यक्तिले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन् । उहाँले उठाएका बिषय सबै नाजायज छन भन्ने होइन । केही माग जाहेज पनि छन् । तर,ती माग मध्ये के पुरा भए र के हुन बाँकी छन भनेर संसदमा छलफलनै नभइकन हामी केही बोल्ने स्थिति छैन । सरकार गम्भिर छ । वार्ता कमिटी बनाएको छ । वार्ताको माध्यामबाटै निकास खोज्ने सरकारको प्रयत्न हो ।
Prevसफलता प्राप्तिका लागि के गर्ने ?
Nextबधशालाको दुर्गन्ध फैलियो गाउँमा, नालाको पानीले पखालिन्छ मासु